Nhau - Gaoji Nhau dzevhiki 20210305
Kuve nechokwadi chekuti munhu wese achave nemufaro unovimbisa mutambo weChirimo, mainjiniya edu anoshanda nesimba kwemavhiki maviri, izvo zvinova nechokwadi chekuti tichava nechakagadzirwa chakaringana uye chikamu chakasara chemwaka wekutenga mushure memutambo weChirimo.
1. Kubva FEB 28th kusvika Mar 4, isu tine 38 nyowani yekutenga mabhiri, inosanganisira matatu zvidimbu zveCCC kuboora uye yekucheka muchina, 4 zvidimbu zveCNC servo kukotama muchina, 2 zvidimbu zve busbar yekugaya muchina. Zvidimbu makumi maviri nezviviri zve multifunction busbar muchina.
Uye pana Mar 2, 14 multifunction busbar kugadzira michina, 2 CNC busbar kugadzira mitsara, uye 3 CNC busbar kugadzira michina zvakapihwa rimwe chete zuva rimwe.
2. Munguva yekumbozorora kupfupi mushure meMutambo weChirimo, tinotaurirana nemakambani mazhinji epamusoro-soro, ekugadzira zvigadzirwa. Sanganisa mhinduro yevatengi, mushumo wekutsvaga mumusika, uye zano rehunyanzvi, isu tinoita chirongwa chesainzi chakashata cheiyo 2021's chigadzirwa kusimudzira chirongwa.
3.Kuvandudza iyo yakasanganiswa manejimendi danho, kambani yedu inokoka nyanzvi musangano inobhadhara zvakadzama kuferefeta. Kutenda kumakore ekuramba tichikurukura pakati pekambani yedu nemasangano ane hunyanzvi, mushure mekutaurirana zvizere nevashandi mumadhipatimendi akasiyana siyana, iro sangano rehunyanzvi rakasimbisa kwazvo mamiriro ekugadzira nekambani yekambani yedu, uye yakapa mazano akanaka uye akazara ekuvandudza nekuvandudza kwe kambani yedu.